WOWOW शीर्ष रेटेड उच्च चाप एकल ह्यान्डल ब्रश निकेल किचन फ्याट्स स्प्रे डाउन स्प्रेयर SUS 304 स्टेनलेस स्टीलको साथ
घर / भान्साको नल / किचनको नलहरू तान्नुहोस् / WOWOW शीर्ष रेटेड उच्च चाप एकल ह्यान्डल ब्रश निकेल किचन नल पुल डाउन स्प्रेयर SUS 304 स्टेनलेस स्टीलको साथ
रेटेड 4.985बाहिर आधारित 41 मूल्यांकन ग्राहक
पुल डाउन स्प्रेयरको साथ यो भान्छाको नल राम्रो तामा कास्टिंग र सिसा धुने बाट बनेको छ। SUS304 वातावरण अनुकूल र स्वस्थ छ, र हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो अभिभावकमा निर्भर गर्दछ। यो तातो र चिसो घुमाई, प्रतिस्थापन गर्न सजिलो, स्थापना गर्न सजिलो, क्लासिक र सुरुचिपूर्ण द्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ, र विभिन्न बाथरूम र भान्छा सजावट को लागी उपयुक्त छ।
तल भान्साको सिink्क नल तान्नुहोस्
एउटा भान्साको सिink्क नल छनौट गर्नु, सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये एक तपाईंको स्वास्थ्य र वातावरणीय संरक्षण हो। भान्सा सिink्क नलहरू जुन ठोस र उच्च गुणस्तरको सामग्रीले बनेका छैनन्, यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ विषाक्त अवशेषहरूको कारण जुन तपाईंको पिउने पानीसँग मिल्दछ। WOWOW को पुल डाउन किचेन सिink्क faucets ब्रश निकल र उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरूले बनेको छ। स्टेनलेस स्टील कम्पोनेन्टहरूको साथ संयोजनमा, यी पुल डाउन किचेन सिink्क नलहरूले तपाईंलाई गुणस्तर, स्थायित्व र प्रतिरोधको मामलामा पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछ। यी पुल डाउन किचेन सिink्क नलको उच्च गुणस्तरको सिरेमिक डिस्क भल्भ कम्तिमा ,500,000००,००० पानी चक्र पूर्ण रूपमा ड्रिप-फ्री रहन सक्छ। यसले कुनै पनि उद्योग मानक पार गर्‍यो। सबै भन्दा माथि, WOWOW को भान्सा कोठामा तान्नुहोस् पानी बचाउनुहोस् किनभने यसको नवीन स्प्रे टाउको छ। निश्चित रूपमा तपाईंले यसलाई तपाईंको पानीको बिलमा नोटिस गर्नुहुनेछ!
स्वास्थ्य बाहेक, यी पुल डाउन किचेन सिink्क नलका कार्यहरू पनि विविध छन्। मल्टि फंक्शनलप्रेयर दुई मोडहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ: हार्ड स्ट्रीम जब तपाईं उदाहरणका लागि पानीले प्यान भर्दै हुनुहुन्छ, र उदाहरणका लागि बर्तन सफा गर्नको लागि हार्ड स्प्रे। एकल ह्यान्डल किचनको नलले रकम र पानीको तापक्रम समायोजन गर्न सजिलो बनाउँदछ। अर्कोतर्फ, कुञ्जी टाउको अधिकतम आरामको लागि degrees 360० डिग्री मोड्न सक्दछ। र अन्तमा तर कम्तिमा होइन, एकल-लिभर सिink्क नलले तपाईंलाई m० सेन्टीमिटर ठूलो धुने क्षेत्र प्रदान गर्न १. m मिटरको पुल-आउट नली प्रदान गर्दछ। यो विशेष गरी तपाईको हातमा डबल किचन सि hand्कमा उपयोगी हुन्छ, तर एकल किचन सिink्कको साथ पनि यी पुल डाउन किचेन सिinkका नलहरू WOWOW को काम लाग्न सक्छ। तपाईंको भान्छाको सिink्क वा वरपर एउटा ठाउँ पनि छैन WOWOW को इन पुल-डाउन किचेन सिfफ्याकसँग।
स्टाइलिश पुल-डाउन भान्सा सिink्क नल
स्वास्थ्य र कार्यको बाहेक, अवश्य पनि, तपाइँ स्टाइलिश पुल-डाउन भान्छा सि f्क नल पनि चाहनुहुन्छ। एउटा भान्साको सिink्क नलले तपाईंको सम्पूर्ण भान्साको डिजाइनको साथ एक एकीकृत एकता बनाउनु पर्छ। केही व्यक्तिले भान्छाको नलको प्रभावलाई हल्का ठान्दैनन्। जब कोही भान्छामा प्रवेश गर्छन्, उसको ध्यान उसको भान्साकोठामा आकर्षित हुन्छ। जे होस्, भान्छाको नलहरू धेरै सानो छन्, तीनिहरूले तपाईको भान्छाको कुल सजावटमा ठूलो प्रभाव पार्छन्। फलस्वरूप यो अत्यन्त महत्त्वको कुरा हो कि तपाईले तपाईको भान्साको नल बुद्धिमानीपूर्वक छान्नुहुन्छ, किनकि यसले तपाईको भान्सालाई ठूलो अपग्रेड दिन सक्छ। यी ब्रश निकल पुल डो कुचिन सिंक नल WOWOW ले तपाईंलाई कुनै पक्कै बिना यो उत्थान दिनेछ।
किचेन सिink्क नलको पुल डाउनले अन्य प्रकारको भान्सा सिink्क नलहरूमा ठूलो फाइदा प्रदान गर्दछ। फिर्ता लिन योग्य पानी नलीको कारण, तपाईं सजिलै आफ्नो भान्छा सिink्क नल विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यो साधारण सुविधाको साथ, तपाईं लगभग कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ तपाईंको भान्सा सिink्क वा नजिक। र अझै, नली तपाईको भान्सा सिink्क नलमा सूक्ष्म रूपमा एकीकृत गरिएको छ, त्यसैले तपाईले कुनै पनि पानी नलीहरू देख्नुहुने छैन जब तपाइँ पुल डाउन किचेन सि sक नल प्रयोग गर्नुहुन्न। एक मात्र शर्त एक उच्च-गुणवत्ता वापसी संयन्त्र छ। किचन सिink्कको नल निकाल्नु पर्ने यो पूर्ण असन्तुष्टि हो, जसमा पानीको नलीले लिनुपर्दैन पछाडि हट्छ। यो अधिकतम आराम प्रदान गर्न सजीलो १००% काम गर्नुपर्दछ।
यी पुल डाउन किचेन सिink्क नलको साथ तपाईंको भान्साको स्तरवृद्धि गर्नुहोस्
WOWOW को पुल डाउन किचेन सिink्क नलले तपाईंको जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ। यी भान्साको सिink्क नलको शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण बल डिजाइनले पानीको नलीलाई बाहिर तान्न र फिर्ता लिन सम्पूर्ण रूपमा सहज गर्दछ। गुरुत्वाकर्षण बल स्वत: स्प्रेयर फिर्ता लिन्छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो कुञ्जी सिन्क चलाउने काम समाप्त गर्दा तपाईं आफैंमा प्रयास गर्नुपर्दैन। यसैले WOWOW को पुल-डाउन किचन सिन्क नल, तपाईंको भान्साको लागि सम्पूर्ण स्तरवृद्धि हुनेछ, दुबै सर्तहरूमा। शैली र कार्यक्षमता। उल्लेख गरिए अनुसार, WOWOW को पुल-डाउन भान्छा सिink्क नलहरूले २ पानी प्रकार्यहरू प्रस्ताव गर्दछ: स्ट्रिम र स्प्रे। यी दुई कार्यहरूले तपाईंलाई सजिलैसँग र एर्गोनोमली स्प्रेबाट स्ट्रिममा बदल्न वा यसको विपरितमा अनुमति दिन्छ। तपाईं यो पानीलाई बन्द नगरीकन साधारण औंला चालको साथ गर्न सक्नुहुन्छ। बटन सहज रूपमा चल्छ र अधिकतम आराम प्रदान गर्दछ।
उचित मूल्य निर्धारण किचन सिंक faucets
क्वालिटी मूल्यमा आउँदछ, तर WOWOW मा होइन। WOWOW ले तपाईंलाई उच्च गुणवत्ताको किचन सिink्क नलहरू प्रदान गर्न हासिल गरेको छ जुन अझै किफायती छ। यसको सामग्रीको कुशल खरीद र अत्यधिक स्वचालित उत्पादन र परीक्षण प्रक्रियाको कारण, WOWOW ले तपाईंलाई कुनै पनि A- ब्रान्डको किचन सिंक नलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किचन सिink्क नलहरू तान्न प्रस्ताव गर्दछ, र अझै ती मूल्यहरूको केही अंशमा। त्यसकारण हामी विश्वस्त छौं कि तपाईंले WOWOW भन्दा राम्रो मूल्यमा कुनै पनि पुल डाउन किचेन सिink्क नलगाउँनुहुनेछैन। नतिजा स्वरूप, WOWOW ले तपाईंलाई बजारमा फेला पार्नुहुने सब भन्दा राम्रो प्राइसकोलिटी रेश्यो प्रस्ताव गर्दछ।
कुनै चीजको लागि होईन WOWOW ले 90 ०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ यसको पुल डाउन किचेन सिink्क नलमा। जब तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि हाम्रो पुल डाउन किचेन सिink्क नल तपाईले सोचे जस्तो होइन, हामी तपाईलाई कुनै समस्या वा सोधे बिना प्रश्न फिर्ता गर्नेछौं। त्यो सजिलो छ। हामी हाम्रा उत्पादनहरूको लागि खडा हुन्छौं र हामी विश्वस्त छौं कि हामी किचेन सि down्क नलको माथि नौंच पुल प्रस्ताव गर्छौं। त्यसकारण हामी जान्दछौं कि तपाई निराश हुनुहुने छैन र तपाईको नयाँ भान्साको सिink्ग नलबाट तपाई सकारात्मक रूपमा चकित हुनुहुनेछ। हामी संसार भर बाट धेरै फर्केका ग्राहकहरु छन्, र हामी निश्चित छौं कि तपाईले हामीलाई अर्को पटक छनौट गर्नु हुन्छ।
सजिलो स्थापना ग्यारेन्टी
WOWOW को पुल डाउन किचन सिink्क नल स्थापना गर्न सजिलो छ किनकि यसको सजिलो इन्टरफेसको कारण। तपाईं केवल एक चरणमा यो नल स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईं पुल डाउन किचेन सि f्क नल आफैंमा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले महँगो प्रोफेशनल हायर गर्नुपर्दैन तपाईले यहाँ धेरै पैसा बचाउन सक्नुहुनेछ। WOWOW को भान्सा सिink्क नल एक डेक प्लेट, एक गुरुत्वाकर्षण बल, तातो र चिसो पानी hoses को एक सेट र बढ्दो सामानको एक सेट संग आउँछ। यो पूर्ण सेटले एक कुशल र छिटो स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्दछ। जस्तो सजिलो!
संक्षेपमा पुल डाउन किचेन सिinkक नलका फाइदाहरू:
● निकट ब्रश निक निक
● उच्च-गुणवत्ता तान्ने पानी नली
● आरामदायी एकल-हात लीभर
Water दुई पानी कार्यहरू
SKU: १2310301००।। विभाग: भान्साको नल, किचनको नलहरू तान्नुहोस् टैग: ब्रश निकल, तल तान्नु, सिंगल होल
१ वा H होल डेक माउन्ट
बाँया / दाँया / केन्द्र
शैली स्विच गर्नुहोस्
भान्सा / इन्डोर / वाणिज्यिक / रेस्टुरेन्ट / घर / १or२ डूब
भान्सा सिink्क नल; Cm० सेमी सेतो तातो र चिसो पानीका होसेस; स्प्रेयर तल तान्नुहोस्; डेक प्लेट; चढ्ने सामान
B *** ई2020-05-01
हामीले यससँग पुरानो मोईन किचनको नल बदल्‍यौं र म अझ खुसी हुन सक्दिन! मेरो बाकस प्रभावित भए जब उनले बाकस खोले। उनले फोममा प्याक गरिएका नल भेट्टाए र शिपिंगको क्रममा अबाधित छन। अर्को कुरा उनी प्रभावित भए उनी स्थापनाका लागि निर्देशनहरू जुन स्पष्ट र संक्षिप्त थिए। प्रत्येक सम्भावित समस्या यो उत्पादको निर्माता संग ठेगाना थियो। दिशा देखि तल एडेप्टर र वाशर जो सम्मिलित थिए। स्थापना सजिलो थियो र नल पहिलो पटक गयो।
हामी माझ चलिरहेको जोक छ कि कुनै पनि परियोजना जुन हामी लिन्छौं एक घण्टा वा दुई लिनु पर्छ; हामीलाई २ दिन लाग्छ। यो एक होइन हामीसँग १/२ घण्टा भन्दा कममा पुरानो नल हटाउने समस्या भयो!
एच *** एन2020-05-06
धेरै राम्रो नल, विशेष गरी जब धेरैलाई यो अधिक पैसाको लागि जान्छ। हामी हाइब्रिड प्लास्टिक / एल्युमिनियम नलका साथ अडिएका थियौं जब हामी हाम्रो नयाँ घरमा सरेका थियौं। यो ट्यापबाट चुहियो र हामी पानी बर्बाद गर्दैछौं। यो गीतको लागि ठूलो अपग्रेड थियो। हामीले भल्भ हार्डवेयरलाई पनि बदल्‍यौं जुन पछि चुहावट भयो। यदि तपाईं यस प्रोजेक्ट को लागी छोड्दै हुनुहुन्छ भने, म भन्छु कि पहिले यो ल्याऊ र यो कार्य सम्पन्न गर्न आफैलाई धक्का दिन्छु। तपाईं निराश हुनुहुने छैन।
मलाई प्लम्बिंग परियोजनाहरू मनपर्दैन। दुर्भाग्यवस, मैले अधिक याद राख्नु पर्ने प्यारा (मोन, डेल्टा, फाफिस्टर) मैले सम्झनलाई वास्ता गरें। यो WOWOW अब सम्म सब भन्दा सजिलो एक मैले कहिल्यै गरेको छु। अन्य ब्रान्डले प्रदान गर्ने गहिरो घाँटी सकेट मार्फत सि to्कमा यसलाई कडा पार्नुको सट्टा यसले सेट स्क्रूको प्रयोग गर्दछ जुन त्यति सजिलो हुन्छ जब तपाईंको सीमित बत्ती र ठाउँको साथ भ्यानिटी क्याबिनेटमा भरिन्छ। तातो र चिसो आपूर्ति लाइनहरू स्पष्ट रूपमा रंग कोडिंग, साथै शब्दहरू तातो र चिसो द्वारा चिह्नित गरियो। अतिरिक्त बोनसको रूपमा, यो //3 8/ मा १/२ ″ एडाप्टरको साथ आयो जुन मलाई शटफ भल्भमा जडान गर्न आवश्यक छ। यसले हार्डवेयर स्टोरको लागि यात्रा बचत गर्‍यो। यो कहिल्यै स्थापना गर्न सबै भन्दा राम्रो नल हो।
मैले केही समयको लागि नलको लागि शप गरें र सोचें कि मैले यसलाई प्रयोग गर्ने बनाएको छु किनकि म अरूले देखेको भन्दा किफायती थियो। अवश्य पनि, म थोरै घबराएँ किनभने यो ठुलो नाम होइन र हामी थोरै प्रोग्राम भएका थियौं कि ठूला नामहरूको साथ जान। यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ र मैले यसलाई स्थापना पनि गर्न सक्दछु र त्यसले धेरै भनिरहेको छ (गम्भीरतापूर्वक!)। निर्देशनहरू मलाई धेरै स्पष्ट थिएन तर यो मेरो जस्तो प्रयासको पहिलो प्रयास थियो (गुगल र यूट्यूबको लागि धन्यवाद!) पानीको आपूर्तिमा पुग्न मैले पानी आपूर्ति विस्तारकर्ताहरू किन्नुपर्‍यो किनभने मेरो पुरानो नलबाट कडा तामाको रेखा यसबाट तल झर्दै थियो र यसमा पहिले नै जोडिएको आपूर्ति लाइनहरू छन्। विस्तारहरू ठूलो बक्स हार्डवेयर स्टोरमा $ १० भन्दा कम थिए। मलाई यो मनपर्‍यो किनभने यो मेरो मानक किचनको सिink्कसँग पनि राम्रोसँग मिसिन्छ किनकि यो सुपर चम्किला छैन तर यो अझै नयाँ र सफा देखिन्छ। यो अप्वेन्सीको बिना नै अपग्रेडको राम्रो मिश्रण हो। म ठूला भाँडामा सजीलो र अझसम्म प्राप्त गर्न सक्षम छु, नल यति ठूलो छैन कि यो मेरो सानो भान्छामा ठाउँको बाहिर देखा पर्दछ। राम्रो स्विच गर्नुहोस् / राम्रोसँग, उत्तम स्प्रे / स्ट्रिम, बीच स्विच गर्न सजिलो। महान, महान मूल्य। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु। (यो समीक्षाको लागि मलाई कुनै पनि हिसाबले प्रतिपूर्ति गरिएको थिएन र कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। म सँधै सशुल्क भुक्तानीका बारे शंका गर्छु।)
पैसाको लागि तपाईं यो नललाई हराउन सक्नुहुन्न! योसँग त्यस्ता सुविधाहरू छन् जुन अधिक महँगो faucets छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थापना गर्न सजिलो छ। मलाई रि ring र स्क्रू एट्याचमेन्ट मन पर्छ नल सि s्क डेकमा जोड्न। होजहरू सबै लेबल गरिएका छन् र ती भारी शुल्क लाग्छ। एकचोटि तपाईंले वजन थप्नुभयो भने स्प्रेले एकदम सजिलो तान्छ र आफैंले फिर्ता लिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले देख्ने एकमात्र कार्यात्मक खराबी स्प्रेको बटन हो। यससँग टगल प्रकार बटन छ जुन नियमित स्ट्रिम, स्प्रे र स्प्रे र स्ट्रीमको संयोजन बीच स्विच गर्दछ। यो स्विच एक प्रकारको फ्लपी हो र यसले स्प्रेयरलाई छोएर लगभग आधा स्प्रे र स्ट्रिम मोडमा स्विच गर्दछ। समयले बताउँदछ कि यो बटन कसरी होल्ड गर्दछ। म यो नल सिफारिस गर्दछु!
मैले यो नल मेरो छोरा र बुहारीको लागि हाउसवार्मि gift उपहारका लागि किनेको हो। उनीहरूसँग कुनै स्प्रेयर नभएको पुरानो क्रोम नल थियो (र उनीहरूसँग पनि डिशवाशर छैन)। मैले सुरुमा कांस्य मोडललाई अर्डर गरेंb/ c मैले सोचे कि उनीहरूसँग पहिले नै मेल खानेछ। उनीहरूले निर्णय गरे कि यसको सट्टामा उनीहरू साँच्चिकै कालो चाहन्थे, त्यसैले मैले स्थानीय कोहलको पसलमा कांस्य फिर्ता गरें (यति सजिलो!) र कालो अर्डर गरें। मलाई बताउन दिनुहोस् - यो नल बम हो! पानीको चाप अद्भुत छ र स्प्रेयरले मैले प्रयोग गरेको कुनै पनि अन्य भन्दा राम्रो काम गर्दछ, र म यो कति राम्रो देखिन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिरहेको छैन। मैले कहिल्यै नसुनेको ब्रान्ड नाम अर्डर गर्न म अलिक आशंकित थिएँ तर म यस ब्राण्डलाई सिफारिस गर्दछु जो ठोस तर सस्तो नल खोज्दैछ। महान काम WOWOW !!!
हामीसँग फ्लोरिडाको एउटा रिसोर्टमा एउटा सानो मोडल घर छ। हामीसँग भएको नलको नौंल हामीसँग सधैं समस्या नै हुन्थ्यो यदि हामी ठुलो कुनै पनि चीज धोउन चाहन्छौं भने। यो नल सही तरिकाले बाहिर काम गर्दछ।
मैले तीनले स्थापनालाई तारांकित गरें किनकि नलको आधार हाम्रो स्टेनलेस सि s्कमा प्वाल भन्दा अलि ठुलो थियो। प्वाल विस्तार गर्न मैले यसलाई फाइल गर्नुपर्‍यो। मलाई थाहा छैन यदि हाम्रो सिink्कमा प्वाल प्वाल सामान्य भन्दा सानो थियो वा नलको आधार व्यासमा असामान्य रूपमा ठूलो थियो भने। एकचोटि मैले यो स्थापित गरें मेरी श्रीमतीले यसलाई मन पराए। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो !!! सही ??
मलाई मेरो नयाँ नल मन पर्छ! मैले मेरो स्थानीय होम डिपोबाट एक डबल मूल्यको लागि किनेको अधिक "सुरक्षित" मार्ग हुनेछ कि भनेर बहस गरेँ, तर मैले यसलाई लगभग एक महिनाको लागि गरिसकेको छु र मलाई यो मनपर्दछ। यो राम्रो गुणको हो र मेरो अघिल्लो (अधिक महँगो, नेमब्रान्ड) नल जस्तै देखिन्छ।
जे *** ई2020-06-04
मैले एक बर्ष पहिले एउटा नयाँ घर खरीदें र बिल्डरले कम अन्तीर हेर्दै नल स्थापना गरे। यस नलले देख्ने र प्रदर्शन गर्ने तरीकाबाट म धेरै खुसी छु। मँ भन्छु कि मेरो केवल सानो गुनासो भनेको पानी बाहिरबाट बाहिर आउँछ तर बलपूर्वक बाहिर आउँदछ, तर मलाई जब यो खोल्दा हल्का स्पर्श हुने बानी भइरहेको छ। स्ट्रिमबाट स्प्रेमा स्विच गर्न सजिलो छ, मैले पज बटन प्रयोग गरेको छैन यद्यपि यसले काम गर्दछ। मैले यो एक हेन्ड्याम्यानले स्थापना गरेको थिएँ र उसलाई स्थापना गर्नमा कुनै समस्या भएन। होम डिपो वा लोवको तुलनामा यो राम्रो मान हो किनकि यो मूल्य दायरामा केही छैन।
म अहिले सम्म stars तारे दिदैछु। हामीसँग केवल यो एक हप्ता वा सो भन्दा बढी भएको छ र यसलाई अहिलेसम्म प्रेम गर्दछौं। यो स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो र म्याट कालो फिनिश हाम्रो ग्रेनाइट काउन्टरटप्सको साथ यति राम्रो हुन्छ। छोटो समयमा हामीसँग यो यो पहिले नै बाहिर गरिएको छ हाम्रो अन्तिम नल हामीले १ वर्ष भन्दा पहिले खरीद गरेको हो। विक्रेता आफ्नो उत्पादन मा राम्रो बनाउन छैन। म केहि समयको लागि खोज्दै थिएँ र यो मूल्यको लागि सबैभन्दा राम्रो देखिन्थ्यो र केही राम्रो इमानदार समीक्षाहरू देखिन्छ। जस्तै मैले भने यो सब भन्दा धेरै केहि हप्ता मात्र भएको छ तर पछि अद्यावधिक हुनेछ र आशा छ कि यो राम्रो रिपोर्ट हो!
एच *** एन2020-06-12
यो नल विश्वको सबैभन्दा ठूलो रहस्य हुनु पर्छ। यो राम्रोसँग माउन्ट गर्दछ, राम्रो देखिन्छ, राम्रोसँग कार्य गर्दछ र राम्रो मूल्यको छ। हामीले हाम्रो आर.वी.मा प्लास्टिकको कबाड हटायौं र श्रीमतीले मन पराए। यो घरमा राम्रो काम गर्दछ।
यो नल महान छ !! म एक २२ बर्षे महिला हुँ जसले मेरो अपार्टमेन्टमा मेरो नल परिवर्तन गर्नुपर्‍यो किनभने मेरो अघिल्लो विच्छेद भयो। मसँग नल वा कुनै प्रकारको प्लम्बिंग परिवर्तन गर्ने कुनै अनुभव छैन, तर यो स्थापना गर्न अत्यन्त सजिलो थियो। मैले यस नल कसरी स्थापना गर्ने बारेमा युट्यूबमा १ मिनेटको भिडियो हेरें र यसलाई २० मिनेट भन्दा कममा सकियो। यो निर्देशनहरूको साथ आउँदछ, तर मैले भिडियो बुझ्न र अनुसरण गर्न सजिलो भएको पाए। अब यो स्थापना भएको छ, यो कुनै लीक बिना धेरै कडा छ र पानी को दबाव prefect छ। अत्यधिक यो नल सिफारिस गर्नुहोस्!
म यो नलको साथ साँच्चिकै खुसी छु। यो यति राम्रो मूल्य थियो कि मैले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्‍यो। पानी स्प्रेयरले राम्रोसँग फिर्ता लिन्छ तपाईं यसलाई ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। तर मलाई मनपर्दछ कि तपाईं यसलाई पूर्ण स्प्रेबाट नुहाउने स्प्रेमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र जब तपाईं यसलाई माउन्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंसँग पक्का विकल्प हुन्छ यो सुनिश्चित गर्न कि तपाईंको ह्यान्डलमा तपाईंको विन्डो सिल वा ब्याकस्प्लस नहुनको लागि क्लीयरन्स छ। हामी बेस फेर्न सक्षम भएका छौं त्यसैले जब म ह्यान्डल प्रयोग गर्दैछु यसले मेरो विन्डो सिललाई कहिले पनि हिट गर्दैन। लचिलो र सजिलो!
वाह! यो मैले सोचे भन्दा स्थापित गर्न को लागी राम्रो / सजिलो थियो। शानदार कार्य गर्दछ, स्थापना प्रक्रिया करीव १/२ घण्टा थियो। यदि तपाईं सि wet्क मुनि सम्भवतः फोहोर लिन डराउनुहुन्न भने, महिलाहरू तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ। एक पेशेवर भुक्तान गर्न बाट तपाईंको पैसा बचत गर्नुहोस्। केही पुरानो कम्बलहरू तल राख्नुहोस् निर्देशनहरूको साथ तपाईंको समय लिनुहोस् तपाईंलाई कडा पकड कम गर्न केही स्प्रे तेल चाहिन सक्छ। यद्यपि यस नलको गुणस्तर तपाईंको समय र पैसाको लागि योग्य छ। म मेरो छनौटसँग खुसी छु।
टी *** ए2020-06-19
सम्पूर्ण प्रक्रियाको सबैभन्दा गाह्रो हिस्सा पुरानो भान्छाको नल हटाउनु थियो। त्यहाँ एउटा एकदमै सानो नट थियो जुन हटाइएको थियो। मैले यसलाई हटाउन बेसिन रेन्च प्रयोग गर्नुपर्‍यो। म विश्वास गर्दछु कि कसले नल स्थापना गरेको छ कि बोल्ट कस्न को लागी गलत उपकरण प्रयोग गर्‍यो। यस नलको साथ मैले हातले कुलो जस्तो ठूलो धुलो पेला पारेको जति गर्न सक्दिन, र त्यसपछि मैले यसलाई पेंच ड्राइभरको साथ तीन पेच पेस गरी पेस गरें। त्यहाँ कसरी राम्रो तरीकाले वर्णन गर्न निर्देशनहरू छन्।
B *** ई2020-06-21
एक ट्रेडमेनका रूपमा म वास्तवमै श ske्कास्पद थिए जब मेरी श्रीमतीले यस भ्वाइसलाई हाम्रो भान्छामा स्थापित गर्न छनौट गरेकी छन् किनकि एउटा मैले कहिल्यै ब्राण्डको बारेमा सुनेको छैन र दुईको अन्तमा $$ अन्तर्गत थियो जसको मतलब यो हो कि तपाईले यसलाई दुई हप्तामा बदल्दै हुनुहुन्छ। तर यो भिन्न थियो यो नल गम्भिर रूपमा टिकाऊ बनाइएको छ र इन्धनको साथ पन्ध्र बर्षमा मैले गरेको वा नलको व्यापारमा भएको कुनै नल भन्दा इमान्दार ढंगले राम्रो छ उनीहरूको अन्य नलहरू प्रयोग गर्न फेरि यो ब्रान्ड किन्नेछ।
मलाई यो नल मन पर्छ। यो सुन्दर र धेरै कार्यशील छ। यो भाँडा बनाउन र पकाउनको लागि तर मेरो बोटलाई कोमल स्नान र पानी दिनको लागि उत्कृष्ट छ। म यो नल संग धेरै खुसी छु। विक्रेता महान् थियो र आईटम समयमै र ठूलो अवस्थामा आइपुगेको थियो। म निश्चित रूपमा फेरि यो विक्रेताबाट खरीद गर्ने छु।
अहिले सम्म यो मैले सोचे जस्तै गरे। कुनै चुहावट छैन, र कुनै दुर्घटनामा भाँडा माझेर यो पनी पछि कुनै क्षति छैन तर मसँग यो केवल केहि महिनाहरू मात्र भएको छ, त्यसैले यो कुनै पनि हिसाबले एक्लो यातना परिक्षण होइन।
स्थापना एकदम सानो तुच्छ थियो, faucets जहिले पनि पहुँच गर्न को लागी स्थापना गर्न कष्टप्रद प्रकारको छ, तर जानकी फिटिंगको साथ पुरानो डिजाइनहरूको तुलनामा जुन सानो ठाउँमा ठूलो रेन्च चाहिन्छ, यो एक टन सजिलो थियो। म यसलाई दोस्रो जोडी हात बिना स्थापना गर्न सक्षम भयो।
जी *** s2020-07-01
मसँग यो नल एक हानीमान्द्वारा स्थापित गरिएको थियो त्यसैले म स्थापनाको सहजताको बारेमा टिप्पणी गर्न सक्दिन तर म भन्न सक्दछु यो सुन्दर छ र राम्रोसँग काम गर्दछ। स्प्रे र स्ट्रिमको बीच स्विच गर्न सजिलो छ। पज बटनले राम्रोसँग काम गर्दछ, तल तल्लो सुविधाले गर्दछ। मसँग पहिले कम, सीधा नल थियो र यो मेरो लागि एक सपना साकार हो। अर्को कुरा म मनपर्दछु कि तपाई सजीलो गरी लामो कन्टेनरहरू भर्न सक्नुहुन्छ। यो उत्कृष्ट र आधुनिक देखिन्छ र यसको राम्रो फिनिश छ। म अत्यधिक यो नल सिफारिस गर्दछु।
भर्खरै यो स्थापना समाप्त भयो र यो शानदार छ। यो मेरो आफ्नै पटकमा नल बदल्दै पहिलो पटक हो र पुरानोलाई बाहिर निकाल्नको लागि मलाई लामो समय लाग्यो तर नयाँ स्थापना गर्न यसले गरेको हो। एकचोटि मैले पुरानोलाई बाहिर लगें, यो नयाँ स्थापना गर्न 8 मिनेट भन्दा कम समय लाग्यो र यसमा पानी बग्न थाल्यो। यसको टाउकोमा ठूलो स्टप सुविधा रहेको छ त्यसैले यदि तपाईंले काउन्टर वा केही चीज हेड तान्न आवश्यक पर्ने भए तपाईंले पानी बन्द गर्न पुग्नु पर्दैन।
इकाई भनेको के हो जुन म मेरो पुरानो भान्छाको नल बदल्न खोज्दैछु। यो अन्य ब्रान्डको तुलनामा एक उत्तम मूल्यको उत्पाद हो जसलाई नाम दिइएको ब्रान्ड एक्लै छोड्नुहोस्। राम्रो लग, राम्रोसँग निर्मित र स्थापना धेरै सजिलो छ। म चाहन्छु कि उनीहरूसँग टचलेस स्प्रे हेड विकल्प छ। मैले स्प्रेयर बदल्नको लागि एउटा किनें र मलाई यो मनपर्‍यो। सुपर सुविधाजनक। मलाई लाग्छ कि यस प्रकारको डिजाइन धेरै परिपक्व छ र यो नाम ब्रान्ड होईन भने पनि यो राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। म यो सिफारिस गर्दछु।
एच *** एन2020-07-18
यो मलाई मन पर्छ! पर्याप्त र राम्रोसँग बनेको देखिन्छ। यो मेरो पहिलेको भन्दा प्रमुख अपग्रेड हो। मलाई यो मनपर्दछ कि यो सजिलैसँग पछाडि पछाडि झर्दछ र स्प्रेयर कसरी स्वचालित रूपमा फिर्ता जान्छ। सयौं डलर वा अधिकको लागि बिक्रि हुने बक्स भण्डारहरूको तुलनामा महान खरीद। किनभने यो यति कम लागत थियो म एक यात्रुलाई यो स्थापना गर्न सक्षम भएँ। अन्यथा म घण्टा सिंक अन्तर्गत रहेको थियो! Lol
आमाको घरको नल चुहाउन थाल्यो र धोबीर र ती सबै परिवर्तन गर्नेसँग सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न। यो एक हो र लगभग minutes० मिनेटमा प्रतिस्थापन भयो। २० मिनेट लिनुभयो पुरानोलाई लिनका लागि, yike। अहिलेसम्म, तीन महिना भयो र यो अझै राम्रो काम गरिरहेको छ। मैले प्लेटमा एउटा प्वालमा बिना स्थापना गरें र यो एकदम राम्रो IMO देखिन्छ। केवल कुरा मात्र योसँग नयाँ //30 ″ वाटरलाइन कनेक्टर छ र धेरै जसो पुरानो भल्भहरू १/२ छन् - त्यसैले यसका लागि हेर्नुहोस्। अन्यथा, उत्तम मूल्य र उत्तम उत्पादन।
यो नल महान छ। हामीले हाम्रो लुगा धुने कोठा सिink्कका लागि किन्यौं, एक नललाई प्रतिस्थापन गर्न जुन3गुणा महँगो खर्च हुन्छ तर केही वर्ष मात्र टिक्यो। यो स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो र यो राम्रो देखिएको र कार्यशील छ, मेरी श्रीमतीले सुझाव दिए कि हामीले यसलाई हाम्रो मुख्य भान्सा सिink्कमा राख्यौं। जब हाम्रो तुलनात्मक रूपमा नयाँ भान्साको सिink्ग नल लगाउँदछौं हामी यी मध्ये एक प्रतिस्थापन गर्दछौं, $ 490 ०० को होइन। एउटा (अन्य ब्रान्ड) जुन हाल छ। हामी यसलाई मन पराउँदछौं, वाह वाह नल।
यस नललाई हामीले लीक गर्ने दुई ह्यान्डलको प्रतिस्थापनको रूपमा खरीद गर्यौं। यो एक सुन्दर छ! यस्तो देखिन्छ कि तपाईले हार्डवेयर स्टोरमा किन्न सक्नुहुने उच्च मूल्यको जस्तै हुन्छ तर मूल्यको एक अंशमा। मेरो पतिले यो स्थापित गर्नुभयो। हामी स्थापना गर्दा एक सानो मुद्दा थियो, तर मलाई लाग्छ कि यो एक व्यक्तिगत सिंक मुद्दा थियो जुन सजीलो नै तय भयो जब मेरो श्रीमान्ले बाटोमा भएको काठ काट्यो र नललाई पूर्ण रूपमा कडा हुनबाट जोगाउँथ्यो। खरीदसँग पूर्ण सन्तुष्ट।
यो नल स्थापना गर्न एक हावा थियो। राम्रो काम गर्दछ, र मलाई शैली मनपर्दछ। कालो कोटिंग पातलो छ र प्रिन्टको प्रतिरोध गर्दछ - जुन म कदर गर्छु किनकि मलाई चिन्ता छ कि यसले हरेक सानो चीज देखाउनेछ। केवल यस चीजको नलमा मात्र मेरो इच्छा छ चुम्बक वा नललाई फिर्ता स्थानमा तान्न मद्दतको लागि त्यस्तै केही चीज हो जुन तपाईंले स्प्रेयर होज प्रयोग गरिसकेपछि गर्नुभयो। यो ठीक फिर्ता फिट फिट हुन्छ तर तपाईं एक प्रकारले यसलाई मैन्युअल पछाडि हेरफेर गर्नु पर्छ। नल स्ट्रिमबाट पछाडि र पछाडि समायोजित गरिएको छ हाम्रो लागि यस प्रकारको स्प्रे गर्नका लागि। समीक्षासँग टिप्पणी गरिएको जस्तो यो कुनै लीकिंग मुद्दाहरूमा छैन (१ महिना अघि स्थापना गरिएको)। हामीसँग यस नल मार्फत हामीले हाम्रो अन्तिम भन्दा बढि राम्रो दबाब दिन्छौं। हामीले "पज" सुविधा प्रयोग गरेका छैनौं - व्यर्थ लाग्दछ जब तपाई सजिलैसँग पानी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, तर सायद अरुले यो उपयोगी पाउँदछन्। सबैमा, एक उत्तम खरीद।
उत्पादन छिटो आयो। मैले यो रोटो-रूटरले स्थापना गरेको थिए किनभने मेरो घर २ 23 बर्ष पुरानो हो र म पेशेवरले चलाएको कुनै पनि प्लम्बरिंग मुद्दा चाहन्छु। यो प्लम्बर ठीक जस्तै नल छ बाहिर जान्छ। ऊ मलाई त्यसबाट कत्तिको सन्तुष्ट छ भन्दै थियो। केही दिनहरूमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्यौं म उहाँसँग पूर्ण सहमत छु। हामी पनि धेरै सन्तुष्ट छौं। यदि तपाईं उत्कृष्ट सुविधाहरूको साथ एक ठूलो अपग्रेडको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने म यो चीज सिफारिस गर्दछु।
मन पराउँछु! पुरानो नल जुन OMG बर्ष सम्म चली रह्यो, अन्तमा असफल! मैले यो शैली हेरें र मलाई यो थाँहा छ भनेर थाँहा थियो।
मैले यो एउटा रोजें र म १००% खुशी छु। यो सजिलोसँग काम गर्दछ, स्प्रे समारोह शक्तिशाली छ र सामान्य प्रकार्य सही छ। यो सबैको खराब भाग थोरै पुरानोबाट बाहिर निस्किरहेको थियो, ठूला पातलो बदाम एकदमै गम्भीर बनेका थिए, र यस्तो स्थानमा छन् जुन असम्भव छ!
साँच्चिकै राम्रो नल राम्रो गुण म एक ठूलो घर सुधार स्टोरहरुमा अधिक तिर्न आशा गर्दछु। म यो खरीद संग धेरै खुसी छु। केवल आलोचना म मात्र तपाईं मैन्युअल रूपले टाउको ठीक एक पटक तपाईं तल तान्नुभयो सुनिश्चित गर्नु पर्छ। यो स्वचालित रूपमा हल्का समायोजन बिना यसको सही ठाउँमा जान्छ। त्यो वास्तवमै एक सानो चिन्ता हो।
पानीको चाप राम्रो छ। योसँग राम्रो स्प्रे विकल्प र पज विकल्प छ।
यो कडा बनेको छ। वास्तवमै स्थापना गर्न सजिलो छ। हामीसँग धेरै अन्य व्यक्तिहरू छन् जुन स्थापना गरेन र हटाउन सकेन धेरै सजिलो र जहाँ एक ठूलो पीडा काम गर्न को लागी। यो एक सजिलो भएको छ। कत्ति राम्रो र कडा हो योमा अचम्मित। बिभिन्न पानी प्रकार्यहरू बीच स्विच गर्न बटन अलि ढिलो छ। मलाई यो अलि कडा चाहिन्छ ताकि यो २ पानी कार्यहरू बीच सजिलो थिएन। तर समग्रमा, यो महान छ।
मलाई १२ वर्ष पुरानो भान्छाको नलले टिप्ने समय भयो तर त्योभन्दा पनि नराम्रो यो पनि सि the्कको मुनि टिप्न थालिसकेको थियो। मैले एक कामदार मानिसलाई बोलाएँ र उसको अर्को खुला भेट 12 दिनमा थियो। म faucets मा विशेषज्ञ छैन त्यसैले म WOWOW मा गएँ र यस नललाई अर्डर गरें किनकि यसको राम्रो समीक्षा थियो र आश्चर्यजनक कुरा यो महँगो थिएन। WOWOW नोट गरियो कि यो दुई दिनमा मेरो घरमा आउनेछ र यो भयो। म यो खरीद संग धेरै खुसी छु।
यस नलले पुरानो एकल हेन्डल पुलआउट स्प्रेयर नललाई बदल्यो। प्लास्टिक स्प्रेयर र होजहरू प्रतिस्थापनको बन्धनमा परेको छ जब तिनीहरूले चुहिन थाल्छन्। यो नयाँ ब्रश निकल पुल डाउन हाम्रो स्टेनलेस स्टीलको भान्सा सिink्कमा आधुनिक र सुन्दर देखिन्छ! स्थापना गर्न तयार थियो। वास्तवमा मेरो मार्गनिर्देशनको साथ, मेरा २, १ year बर्ष उमेरका बच्चाहरूले नललाई आफै प्रतिस्थापित गरे। म LOL गर्न सक्षम हुन्थ्यो जस्तै म दुर्गन्ध मा क्रॉल गर्न सक्नुहुन्न सबैभन्दा गाह्रो अंश पुरानो नल बाहिर रही थियो ...
अहिले सम्म, यो खरीदसँग धेरै खुसी छु र मैले सिफारिस गरेको छु!
मैले यो नललाई मेरो भान्छामा स्थापित गरें! मेरी श्रीमतीले यो देखी र यसलाई मन पराई। हामी फार्म हाउस लुकको लागि जाँदैछौं र यो वास्तवमा हामीले चाहानुहुन्छ सजीलो स्थापना गर्न तपाईंलाई निर्देशनहरू पनि आवश्यक पर्दैन। म कुनै सजिलो मान्छे होइन तर मैले यो महसुस गरें !!! मलाई old० मिनेट लाग्यो पुरानो बाहिर लिन र नयाँ स्थापना गर्न !!! मलाई चाहिएको खण्डमा अर्को किन्नुहोस्! द्रुत शिपिंग पनि
मेरो मोन किचन नल बदल्नु पर्छ। यसभन्दा पहिले नल किन्नुभएन र लागतमा छक्क पर्नुभयो! WOWOW पाए र मूल्य राम्रो थियो त्यसैले मैले यसलाई शट दिएँ। यो अचम्मको देखिन्छ, राम्ररी काम गर्नुहोस् र मलाई लाग्छ कि मेरो पानीको चाप राम्रो छ। मैले स्थापना गरेको साथीलाई कुनै समस्या थिएन।
प्रभावशाली नल स्टाइलिंग र यो आफै गर्नुहोस् गर्नका लागि स्थापना गर्न अत्यन्त सजिलो छ। मैले पुरानो संयोजनको नललाई रोटरी उपकरणको साथ काट्नुपर्‍यो किनभने जडानहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए। नयाँ सम्मेलन यो सजिलैसँग गयो किनकि प्रदान गरिएका जडानहरू राम्रो ईन्जिनियर भएका थिए र सोचेका थिए। म यी चीजलाई अत्यधिक सिफारिस गर्दछु जो कोही उनीहरूको किन्चको नल बदल्नमा रुचि राख्छन्।
यो एक सुन्दर नल हो जुन मेरो भान्साकोठामा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। मैले १ 13 वर्ष पुरानो मोन नलको लागि प्रतिस्थापनको रूपमा यसलाई किनेको हो। स्थापना सजिलो देखिन्थ्यो, तर मैले मेरो प्लम्बर रोक्नुपर्दा यसलाई स्थापना गर्न असक्षमता र पुरानो नल हटाउने कठिनाईको कारण। उनले भने कि उनी प्रभावित छन् र यस ब्राण्डको अन्य पनि स्थापना गरे। स्थायित्वसँग कुरा गर्न सक्दैन किनकि मैले भर्खरै स्थापना गरेको थिएँ, तर यो एक निश्चित सुधार हो।
उच्च गुणस्तर, सबै भागहरू ध्यानपूर्वक जडानहरू र सजिलो असेंब्लीका लागि चिन्हित। अतिरिक्त ठूलो बोल्ट - सिंकको मुनि लागू गरियो (सिink्कमा नल सुरक्षित गर्न) पुरानो मानक बोल्टमा धेरै सुधारिएको छ - हात र स्क्रू चालकबाट स्थापना गर्न सजिलो। मैले स्थापना गरेको पहिलो भान्छाको नल हो; त्यसो भए, यदि म सजिलैसँग यसलाई स्थापना गर्न सक्दछु, जो कोहीले पनि गर्न सक्छ
हामीसँग यस नललाई केही हप्ता सम्म स्थापना गरिएको छ र अहिलेसम्म यसले राम्ररी काम गरेको छ। हामीसँग कुनै लीक वा खराब स्वाद वा केही खराब समीक्षा जस्तो कलarn्ग भएन। मेरो श्रीमान्ले यसलाई लगभग minutes० मिनेटमा स्थापित गर्नुभयो। यस्तो देखिन्छ र उच्च गुणवत्ता महसुस गर्दछ र अरूको तुलनामा ठूलो मूल्य हो। म यो किनेकोमा खुसी छु! सिफारिश गर्दछ!
एच *** एल2020-10-01
यो मूल्य को लागी एक महान नल हो। मैले विगतमा अन्य धेरै महँगो नलहरू प्रयोग गरेको छु, तर यसले समान रूपमा राम्रो काम गर्दछ! यसले मेरा आवश्यकताहरू पूर्णतया पूरा गर्दछ। मेरो भान्छाको पानीको चाप धेरै राम्रो छ किनकि हामीले पुरानो नललाई बदल्यौं। म यो लागत लाई लागू गर्न को लागी सिफारिस गर्दछु जब सम्म तपाई डिलक्स मोडेल खोजिरहनु हुन्न जुन कि or वा times गुणा मूल्य हुन्छ।
मसँग स्थापना गर्नमा समस्याहरू थिए तर त्यो किनभने मेरो सिink्क गलत बनाइएको थियो। मैले समस्या पाए पछि यो सजिलो भयो! मेरो नयाँ नल सुन्दर र रमणीय छ! म एक लामो नल पाएकोमा धेरै खुसी छु र मेरो लामो प्यानहरू पानीले भर्न कपहरू प्रयोग गर्नुपर्दैन। पुल आउट फिचर पनि राम्रो छ!
यो ठीक नल घर डिपो र मेनार्डमा २०० डलर भन्दा बढी थियो! मलाई धेरै पैसा बचाउनु भएकोमा धन्यवाद!
यो मेरो भान्छाको नवीकरणको लागि एक अपग्रेडको रूपमा खरीद गरिएको थियो, जुन २० + यो नल बदल्छ। उचाई जस्तै तपाईं एक ठूलो भाँडो भर्न र यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। एक बटनको स्पर्शको साथ सबैमा एक स्ट्रिम र स्प्रे समारोह राख्नु एक उत्तम सुविधा हो, ब्रश गरिएको स्टेनलेस स्टील फिनिश राम्रो र सफा हेर्ने हो। मूल्यको लागि ठूलो मूल्य।